से’तो या का’लो यो’निमा आउ’छ त धेरै म’जा, जा’नी रा’खौँ। – Sidha Post 24
महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत गर्छन । तर आफ्नो स्त”नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन ।
स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ ।
जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि मसाज गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीं स्त”नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन ।
पछि त्यही गाँठो विस्तारै क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई खतराबाट बच्न सहज हुन्छ ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
प्रिय मायालु, खै किन हो, हिजोआज तिमी धेरै परिवर्तन भएका छौ । सायद तिमीले मभन्दा धेरै माया गर्ने मान्छे पाएर होला ! तिम्रो अर्काे प्रेमिकाको अगाडि म फिक्का भएँ हो ? तिम्रो अर्काे प्रेमिका छ भने सिधै मसँग भने हुन्छ ।
छैन भने मसँग किन टाढा हुन खोज्छौ ? सुरुमा माया गर्न सिकाउने नै तिमी हौ । जब म तिम्रो मायामा डुब्न थालेँ, त्यसपछि तिमी टाढिदै गइरहेका छौ । मलाई एक्लै बनाउन किन खोजिरहेका छौ ?
मैले तिम्रो खुसीको लागि केसम्म गरेको छैन ? मर्नबाहेक हर कुरा गरेकी छु । प्लीज मलाई बुझ्ने कोसिस गर । म अहिले पनि तिमीलाई उत्ति नै माया गर्छु । तिमीलाई मैले यसै रोजेको हैन ।
विवाहको लागि घरमा मान्छे आउँदा पनि तिम्रो नाम लिएर बसेकी छु । मलाई बुझ्ने कोसिस गर । मेरो माया लाग्दैन भने तड्पाएर नराख । मसँग जिन्दगी बिताउँदा खुसी हुन्छुजस्तो लाग्दैन भने मलाई सिधै भन ।
मायामा पाउनु पर्छ भन्ने मात्र छैन, गुमाउनु पनि माया नै हो । तिम्रो लागि भनेर मैले सबैथोक छाडेँ तर किन आज तिमीले मलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको हो ? म तिम्रो मुखबाट सत्य कुरा सुन्न चाहन्छु, नौटंकी कुरा हैन ।
मनमा जे छ, सत्य भन्नु । मसँग टाढिनुको कारण के हो ? सत्य भन्नु । चित्तबुझ्दो जवाफ दियौ भने म तिम्रो जीवनमा कहिले पनि आउँदिन, आफू पनि दुःखी हुन्नँ । जिन्दगीमा तिमीलाई मात्र हैन मलाई पनि तिमीले चाहेकोजस्तै खुसी भएर बाँच्नु छ, दुःखी भएर हैन